Pretra malagasy iray, misionera any Filipinina - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tamin’ny taona 2011 no nahatongavako taty Filipinina. Katolika no ankamaroan’ny olona aty. Fa ny amin’ny faritra atsimo atao hoe Mindanao no saika silamo avokoa ny mponina ao. Karazana katolisisma hafa kely tsy dia toy ny mahazatra anefa no fahita aty fa somary feno karazana “processions” sy hetsika ary “décoration” aty ivelany. Aty Filipinina no ahitana an’izao karazana “dévotion” amin’Olomasina isan-karazany izao. Ary dia milahatra tokoa ny olona mba hikasi-tanana sy hanoroka an’ireny sarin’Olomasina sy “relique” ireny. Ambony dia ambony ny fanajan’ny kristianina katolika an’ireny relijiozy sy mpisorona ireny, toa an-dry mompera sy ry masera. Tia mankalaza sy manao fety ny ankamaroany, ary dia tena mahavita mandany vola sy harena amin’izany izy ireo.
Ny fiainan’ny Filipianina
Tsotra ny ankamaroan’ny vahoaka Filipianina. Maro ireo mbola mifikitra mafy amin’ny fomban-drazany sy mino an’ireny karazana hery feno misitery tsy ahitana fanazavana ireny. Manamarina an’izany ohatra ny nahitako fianakaviana iray tena katolika be, nefa rahefa narary ny zanany dia entina am-bavaka sy angatahana ny fahasitranana avy amin’i Zanahary mba ho sitrana soa aman-tsara. Ary ampiarahana amin’io vavaka io koa ny fakanesana any amin’ny dokotera, fanaovana ny analizy samihafa. Ary raha mbola tsy sitrana na tsisy vokatra azo tsapain-tanana ny fitsaboana tany amin’ny dokotera, dia entina any amina Albolaro na kuwak doctor (karazana dadarabe), sao hono nataon’olona na avy amin’olona fahavalo ilay aretina.
Olon’ny fo ny ankamaroan’ny vahoaka Filipianina. Tsy dia manambara ary tsy mampiseho an’izany tsy fahafaliany izany ety ivelany ary tsy miteny mivantana. Na dia katolika kristianina be aza ny ankamaroan’ny vahoaka aty dia somary mbola marisarisa ihany ny fahazoana ny katesizy sy ny tena fototra ijoroan’ny moraly kristianina sy ny fampiharana izany amin’ny fiainana andavanandro. Ity Filipinina ity no firenena fahatelo betsaka mpivaro-tena indrindra aty Azia. Malaza ihany koa ity firenena ity aty, amina resaka kolikoly sy tsolotra ataon’ireo manam-pahefana sy politisianina mpitondra fanjakana. Maro noho izany ireo mahantra sy fadiranovana, toy ny 4-Mi any Madagasikara: matory ambany tetezana sy mangataka amoron-dalana.
P. Albert MAMONJISOA, svd aty Filipinina, Azia
P.Albert MAMONJISOA, svd Malagasy any Philippines, Azia.
P.Albert, svd miaraka aminireo tanora Katekista Filipina.